Iipivots zeVizrt kuFikelelo kwiFlexible | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Iipivots zeVizrt kuFikelelo oluFlexible
Uhlaziyo olupheleleyo lwe VizrtImveliso enikezela ukuhlangabezana neemfuno eziguqukayo zobume beendaba banamhlanje
Vizrt, Umnikezeli ophambili wehlabathi wezixhobo ezichazayo zokubalisa isoftware (#SDVS) yabenzi bemithombo yeendaba, namhlanje ubhengeze ukuFikelela okuFlexible. NgokuFikelela kuFlexible, Vizrt yabelana ngomngcipheko ohambelana nokwakha okanye ukuphucula amandla emveliso kwangaphambi kokuveliswa kwexabiso.
Michael Hallén, i-CEO kunye noMongameli Vizrt Iqela lithe, Ukufikelela ngokuFlexible kubeka impumelelo kubathengi bethu entliziyweni yolwalamano lwethu, kubaxhobisa ngokuziqhelanisa nokuziqhelanisa ukuze bahlangabezane neemfuno zeshishini eziguquka ngokukhawuleza. Inika ulawulo olukhulu kwiindleko zabo zokusebenza, yehlisa isithintelo ekungeneni, kwaye ikhawuleze ibuye kutyalo-mali. Intsha yethu Vizrt ISolution Suites yenza ukuba izisombululo zethu zifikeleleke lula kwaye zihambelane neziphumo zabathengi zokwenyani, zinika abathengi bethu isantya kunye neendlela zokuqinisekisa ukuba zixabisekile. ”
Ngokufikelela kuFlexible, imodeli yokuhlawula rhoqo, ezintlanu ezintsha Vizrt I-Solution Suites ibonelela ngendlela entsha kunye namandla enziwe lula abathengi ukulungelelanisa izixhobo zabo zesoftware yokuvelisa kunye nokunyuka kunye nokuhla ukuze bahlangabezane neemfuno zokutshintsha kwemveliso ngokukhawulezas. Oku kubonelela Vizrt ukufikelela kubathengi kwindalo esisityebi emhlabeni yezixhobo ezichaziweyo zokubalisa amabali ukunceda ekufezekiseni iziphumo zeshishini ngokukhawuleza ngelixa kuthintelwa isidingo sangaphambili, utyalomali olukhulu.
Izicwangciso zeFlexible Access ziya kubonelelwa koku kulandelayo Vizrt Solution Suites:
Vizrt Iindaba zeendaba
Vizrt Inyani eyongeziweyo (XR)
Vizrt Ulawulo lwemveliso
Vizrt Ukuhamba kweendaba
Vizrt Ukutshintshwa kwesiteshi
Ukuguquguquka kwemveliso, ukuguquguquka kwemali
Akukho mvelisi womxholo unokuqikelela ukuba imodeli yeshishini labo iyakutshintsha njani, nalapho kufuneka batyale imali ukuhlangabezana neemfuno zemveliso kunye nemithombo yengeniso. Ukuhlala kufanelekile, kuya kufuneka bavelise umxholo ongaphezulu owenzelwe iifomati zemithombo yeendaba. Ngokufikelela kwiFlexible, abavelisi bemithombo yeendaba bahlawula kuphela into abayifunayo kwaye banokulinganisa ukufikelela kwabo ngokwenani leentatheli ezifuna izixhobo zokuyila, zingaphi iziphumo zestudiyo ezifunekayo, zingaphi iikhamera ezilandelelweyo ezizisa ubunyani obungathandabuzekiyo, njl.
Vizrt I-Flexible Access Solution Suites ziyafumaneka kwangoko ukusuka kwizantsi njenge- $ 1,795 USD ngenyanga. Nceda unxibelelane ne Vizrt ingcali yokuthengisa ngolwazi oluthe kratya.
Previous: I-KRK yamkela isizukulwana esitsha se-Subwoofers
next: I-Ross Ividiyo ikhetha iMatrox SMPTE I-ST 2110 Amakhadi eNIC kwiNjini ye-XPression Graphics yeenjini